I-Spring kuphela: i-Base Cloakroom evela e-Top Secret
Uma udinga yonke indawo, izinto ezimfushane futhi ezinhle - kufanelekile ukubuka indawo eyimfihlo yeSayithi. Umkhiqizo wasePoland uyaziwa ngokuthi uhlelwe kanjani: ukuqoqwa kwawo kusetshenziswe ngokucophelela futhi kuhlanganiswe kuphela ngamasheya asebenzayo. Izitayela zefashini zethimba lokudala - hhayi umhlahlandlela oqondile wesenzo, kodwa isenzakalo sokuhlukanisa ikhabethe lezinsuku zansuku zonke. Izindwangu zemvelo, ukusika kahle futhi ngesikhathi esifanayo - amanani entando yeningi. Ayikho into engafanele, kuphela engcono kakhulu - lena yimiqondo ye-Top Secret.
Isithombe se-Promo se-Top Secret S / S 2017
Ukuqoqwa kwentwasahlobo yomkhiqizo kuboniswa ngamakhisolomu ngesitayela esihle seKazheal. Isisekelo sezigqoko - izikhumba eziphephile, iziketi eziqondile, ama-sweaters amakhulu, izigqoko zokudoba, izigqoko ezincane, izigqoko zokugqoka kanye nezembatho. Amapaki ama-half-season, ama-jacket-jackets nezigqoko ezikhanyayo zizobaluleka ezinsukwini ezipholile. Izinto eziyisisekelo zingahle zihlangane nomunye nomunye, zenze izinto ezilula, kodwa ezihlelekile. Iphalethi e-pastel ethule, lapho izinhlobonhlobo ze-blue, ezibomvu kanye nezitshalo eziphuzi zelanga zifaka isandla, zifanelana kangcono nezithombe zansuku zonke.
Isitayela sedolobha elikhulu: iziphephelo ezingenakunakekelwa zamakhisimisi entwasahlobo Imfihlo Ephezulu
Akunakwenzeka ukuba ungakhulumi ngomzila ophezulu we-Secret Secret wesifazane ngezimo zothando. Ama-air blouses kanye nama-t-shirts anezicabha ezivuthayo nezindawo ezishisayo, izingubo ezithandekayo nama-drapes, amajack amancane nezigqoko zabadwebi abanikeza ukuhambisana nezesekeli eziqhakazile nezicathulo.
Okufakiwe Okufakiwe Okuyimfihlo: S / S 2017 Luckbook
Umkhankaso wokukhangisa ophezulu we-S / S 2017
Indlela yokuthenga into efanele futhi wenze ngaphandle kwezindleko ezingadingekile: izimfihlo ezingu-5 zokuthenga nge-smart
Ukuhamba ngezimpahla zonyaka ehlobo 2016: ukubuyekezwa kwamamodeli wamanje
Yini okufanele ugqoke ehlobo ehhovisi?
Ukugqoka iholide ngokugcwele ngoNyaka Omusha 2016: isithombe esihle kakhulu
I-jeans enemfashini yomswakama-ehlobo 2016: onobuhle besimodeli besifazane
Izikebhe zezimoto zamakhosikazi eziphathekayo Spring 2016: izitayela zamanje kanye namamodeli
Ungaqala kanjani ukudla kahle?
Yini esusa ukucasuka nokukhulula ukuleleka?
Ukuphila komuntu siqu ka-Xenia Borodina
Isibikezelo sezulu: kuyoba yihlobo lika-2016 eRussia
Ubuso obusika obusweni, okuzenzelwe
Amathiphu kubazali: yini engasetshenziselwa ukukhulisa ingane
Qalisa ngokufanele impilo yomndeni
Ukulahlekelwa izinwele, izimbangela nezindlela zokwelashwa
Izithelo ezifriziwe ezihlanzekile
I-Lipstick: umbhalo oqhathanisa no-Roskontrol
Imfihlo yobuhle besifazane
I-Panini nge-nectarine ne-yogurt
Izifo ezinkhukhu ze-Guinea
Kanjani ekhaya ukuqinisa izinwele nokubenza baqine?